Chekuita kana macOS Yakakwira Sierra yekumisikidza ikava nehuori | Ndinobva mac
Zvaunofanira kuita kana macOS Yakakwira Sierra kuisirwa ikava nehuori
Peter Rhodes | | apuro, macOS High Sierra, Mac makomputa
Chinyorwa ichi chakakumikidzwa kune wandinoshanda naye uye anopfuura hanzvadzi hanzvadzi Lorena Díaz mushure mekutambura kukundikana mukumisikidzwa kweMacOS High Sierra nyowani paMacbook Air yake kubva muna 2012. Izvo zvese zvakatanga apo, mushure mekubudirira kumisikidza yake nyowani iPhone 8 Uyezve, foni yandakashuvira kwenguva refu, Akandikumbira kuchenesa mashandiro eMacBook Air.
Iyi 2012-inch Macbook Air kubva muna13 iyo, mushure mekuchenesa nekubvisa maapplication awakange usisashandise kana kumisikidza zvisina musoro, yaida system yekuvandudza kukwanisa kugadzirisa kukanganisa neakaundi account iyo isina kuwedzerwa kuMail nekuda kwekusawirirana kusinganzwisisike.
Chinhu chekutanga chandakaita kutarisa kuti ndedzipi sisitimu yaishandiswa neMac ndikaona kuti yaive OSX Yosemite, saka ndakamuudza kuti anofanira kugadzirisa iyo system kune yazvino, kunyanya kana ndaziva zvaitika mumasvondo apfuura. nematambudziko eIntel processor. Hapana nguva patinopokana nazvo uye Takapinda muMac App Store kurodha pasi yazvino vhezheni ye macOS High Sierra.
Iyo komputa yakamhanyisa zvese nekukurumidza zvakanyanya kunyangwe iyo 2GB ye RAM iyo modhi iyi ine uye kuisirwa kwakatanga. Uye panguva ino pandinofunga kuti kukanganisa kwakaitwa, kumbomisa kuiswa. Iyo sisitimu yakashuma kuti paive ne46 min yekupedzisa kuisa iyo nyowani system uye aifanirwa kuenda kumba saka takaona kuti nekudzikisa chivharo chelaptop zvese zvakaramba zvakangofanana uye pakuvhura kwacho kwakaramba kuchienderera. Saka zvaive zvakadaro, kumisikidza kwakaramba kuchienderera saka akavhara muvharo, iyo laptop yakaiswa mukumiswa ndokuenda kumba kwake kwaaifanirwa kuiisa zvakare kupedzisa kuisirwa.
Chii chakamushamisa apo zuva rakatevera, paakabvuma kuti aifanira kuvhura laptop kuti aenderere mberi nekumisikidza, iyo system yakamuudza kuti pane dambudziko nefaira rekuisa uye kuti yaifanirwa kutangwazve kuyedzazve.
Akakurumidza kundidaidza ndokundiudza zvakaitika uye ndiko kwandaifanirwa kuenda kunoyedza nzira kusvikira ndasvika pane izvo zvandiri kuda kukuudza, nekuti ndizvo zvakaita kuti ndiwanezve OSX Yosemite operating system uye nokudaro ndikwanise kutanga maitiro zvakare.
Nguva yega yega komputa painotangazve yairatidza kukanganisa kumwechete zvakare. Haugone kupedzisa kuisirwa macOS Yakakwira Sierra nekuda kwekutadza mune yekuisa faira. Panguva ino, ini ndaigona kungofunga nezve kurasikirwa kweruzivo rwese pakombuta, asi pakupedzisira, nekuita zvinotevera, yekare system inogona kudzoreredzwa uye data rakachengetedzwa:
Isu tinodzima komputa zvachose nekudzvanya bhatani remagetsi kwemasekonzi 5-6.
Iye zvino tinodzvanya bhatani remagetsi uye tichangopusha iyo «sarudzo» kiyi kutanga iyo Boot Loader.
Isu tinosarudza iyo yekudzoreredza, mune yako OSX 10.10.5
Iye zvino isu tinoratidzwa hwindo umo matinogona kusarudza Reinstall OSX. Isu tinobaya padziri.
Isu tinosarudza diski kwatinoda kuti idzorerwe, inova ndiyo imwechete iyo yaiiswa pairi uye tinomirira.
Iyo sisitimu inodzosera iyo system uye sezvo isu tisati tambobvisa iyo diski mukuiswazve, iyo data yaive mairi ichiri munzvimbo imwechete uye yakasimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Zvaunofanira kuita kana macOS Yakakwira Sierra kuisirwa ikava nehuori
Ini ndinofunga honzeri yedambudziko raunofunga harisi iro rakarurama. Kubva pane rondedzero yenyaya yaunogadzira, shamwari yako yaifanira kudzikisa chivharo cheMacbook Mhepo muchikamu chekurodha muAppstore uye kukanganisa kurodha kweyekuvandudza hakuna kumbove dambudziko. Chimwe chinhu chingadai chave kudzikisa muvharo muchikamu chekumisikidza, kana isu tichingoona apuro, bhawa rekufambira mberi uye fungidziro yenguva yasara yekumisikidza. Panguva iyoyo zvakakosha kukanganisa chero maitiro.
Ndine Macmini uye ini ndaive nedambudziko rakafanana pandakagadzirisa vhezheni yeHigh Sierra uye mune yangu pakanga pasina chivharo kana skrini yekuvhara uye yaivewo maitiro asina zvinokanganisa. Panzvimbo iyoyo ndakawana mhedzisiro yakafanana. Kutangazve mushure mekutanga patsva ini ndaigara ndichiwana yakafanana skrini ine meseji imwechete.
Ehezve, nzira yekuigadzirisa yaive yakafanana. Ndakaenda kubhutu rekudzorera (Cmd + Alt + R) uye ndikadzoreredza sisitimu. Zvese zvinhu zvakafamba mushe uye pasina kurasikirwa chero data kana kuiswa chishandiso. Ehezve, ini ndichiri kufanira kuyedza kuisa iyo yekuvandudza, nekuti izvozvi ndinorega pane izvo zvidzoreso
Yakavanzika firita yeiyo 13-inch MacBook Mhepo inoratidza
Apple haina kupotsa CES uye yakaita misangano yakati wandei nemakambani eAugmented Reality